Malunga nathi-uShijiazhuang Jipeng Ukungenisa izinto kunye nokuthumela ngaphandle, Co, Ltd.
"Yingcali yombhobho! Siyingcaphephe yokuphosa!"
Sisigqeba esikhokelayo sokungenisa izinto kweli kunye nesithumela kumazwe angaphandle nesivunywe nguMphathiswa wezoqoqosho lwangaphandle kunye noRhwebo lwePRChina, kwaye samiselwa ngo-1998. Inkampani yethu ikhethekileyo kwiimveliso zensimbi kunye nezimbiwa, oomatshini, iimveliso zamashishini kunye neemveliso zombane. Ezona mveliso ziluncedo kwaye zinamava ziibhobho kunye nezinto ezincedisayo, kunye neenxalenye zokwenza isinyithi. Kule ndawo yeshishini, siye sanikela ubungqina kwaye sathatha inxaxheba kwimbali yaso kunye nasekuphuhlisweni kwasekuqaleni. Ukuza kuthi ga ngoku, sineminyaka engama-20 sikulo mkhakha.
1. Hayi-hub yaphosa yentsimbi yenkqubo yemibhobho yentsimbi, ukufakelwa kunye nokuqokelelwa kwensimbi engenasinyithi okwakha amanzi, inkunkuma kunye nokuhamba ngokwe-EN877, DIN19522, ASTM A888, CISPI301, CASB70, ISO6594.
2. Isokisi kunye ne-spigot cast iron iron pipe pipe system ngokwe-BS4622, BS437, BS416, ASTM A74.
3. I-Ductile yaphosa iibhobho zensimbi kunye nezixhobo zokuhambisa intsimi yamanzi ISO2531, EN545, EN598.
4. Isembozo se Manhole kunye nesakhelo ku-EN124, SS30: 1981, izinto zokuncamathisela, umgangatho kunye nophahla.
5. Iindidi ezahlukeneyo zokuphosa kunye nokuxolelwa kunye nokuchwephesha kwamacandelo ngokwendlela yabathengi bangaphandle okanye iisampulu. Izixhobo zinokuba ductile, i-carbon iron kunye ne-stainless.
Iimveliso zethu zihlala zinesidima esifanelekileyo kwiimarike zangaphandle kwaye zithunyelwa kakhulu eMelika, eCanada, kumazwe aseYurophu, kumazwe asempuma mpuma aseAsia, iRussia, HK neTaiwan, njl njl. Siyaqinisekisa ukubonelela ngemveliso ekumgangatho uphakamileyo, ekuhanjisweni kwexesha kunye nenkonzo efanelekileyo. Bonke abathengi abasekhaya nakwamanye amazwe bamkelekile kwinkampani nakwiifektri zethu.
1. Yasekwa ngonyaka ka-1998, inkampani yethu inembali ende, ethi inzuzo ingaphaya kwezigidi ezingama-20 ezigidi zaseMelika. Sinezinto ezintle ezinamava ukuba sikhonze abathengi bethu bamanye amazwe, umphathi weprojekthi okhethekileyo ukuxoxa malunga nemveliso, ukuphatha amaxwebhu kunye nemiba yokuhambisa njl njl. Singenakukwazi ukuvelisa iimveliso ezisisigxina kuphela, kodwa sibe yi-OEM, sokwenza iimveliso ezahlukeneyo okanye iinxalenye zokusasaza ngokwabathengi bamanye amazwe imizobo okanye iisampulu.
2. Abathengi banokonwabela ukuhanjiswa okukuko ngokukuko nangokufanelekileyo kokuhanjiswa kweempahla apha, enye yeengenelo zethu kukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zeempahla kwisingxobo esinye esipheleleyo, abanye abathengi bethu badinga ngaphezu kweentlobo ezi-5 zeempahla ngexesha elinye kwisikhongozelo esinye. Oko kuya kulunge ngakumbi kubathengi bethu.
3. Ukulawulwa komgangatho yenye inkonzo exabisekileyo kubathengi bethu. Ngexesha lokuveliswa okanye ngaphambi kokuba kuthunyelwe, umlawuli wethu osemgangathweni uya kuba kumzi-mveliso ukukhawulezisa ukuhanjiswa kunye nokujonga umgangatho kunye nengxelo ebhaliweyo. Amanqaku angafezekanga ayakwaliwa de umenzi abenakho ukuvelisa ngokutsha okanye ukuphucula umgangatho ofanelekileyo.